Iimfihlo zokuBhloga indlela yakho kwiNgeniso yeMifanekiso emithandathu
ProBlogger: Thenga ikopi yeNcwadi kaDarren!
NgoLwesibini, Aprili 8, 2008 NgoLwesihlanu, Februwari 12, 2016 Douglas Karr
Emva kokuba ndiqalise eyam incwadi kudala, ndiyazi ukuba kunzima kangakanani ukugcina ibhlog kunye nokucwangcisa konke endikufundileyo malunga nokubhloga kunye nemithombo yeendaba zentlalo kwincwadi enye, ehambelanayo.
Kubonakala ukuba Ukujonga kukaDarren weProblogger wenze kanye loo nto, nangona kunjalo. Ndijonge ibhlog kaDarren isusa kwaye ungabona ukuzingisa kunye nokucaca kombono wokuba uDarren uye wavela waba sisixhobo esihle seebhlog. Problogger Ngokuqinisekileyo kuluhlu lwam 'lokufunda-kufuneka' kwam ukondla kwaye akukho nto iyithandayo kunye nokuqhayisa I-Shoemoney kwaye UJohn Chow (luthando olukhulu kwaba bafana, nangona… ndizifundile iibhloko zabo, nazo!).
Nalu ushwankathelo lwencwadi evela eAmazon:
Ukubhloga kuye kwaba yinto eyonwabisayo nenomdla kwabaninzi, kodwa ngakumbi nangakumbi iiblogger ziyayifumana inokuba sisiseko esihle somvuzo othe ngqo okanye ongathanga ngqo. Nangona izithintelo zokuqala iblogi ziphantsi, ngaphandle kwesikhokelo sobuchwephesha kulula ukukhathazeka xa impumelelo ingangqinelani nokulindelweyo. Ebhalwa ngumdali wezixhobo # 1 zokwenza imali ngeeblogi, iProBlogger ithatha umfundi ukusuka ekuqaleni kokufumana imali okanye ngenxa yebhlog. Ngokusebenzisa inyathelo ngenyathelo kwizifundo ezisebenzayo umfundi uya kukhetha isihloko sebhlog, ahlalutye intengiso, asete ibhlog, ayikhuthaze kwaye afumane ingeniso.
Siyavuyisana noDarren noChris ngale nto isahluko esitsha Kwimbali kaProblogger! Kuluhlu lwam lomnqweno!
tags: incwadidarren umgcaproblogger
Yintoni esebenzayo kwaye yintoni engasebenzi kwintengiso ye-Intanethi + iibhentshi eziphambili
Eventbrite: Iziganeko Ngokwenene Zenziwe Zilula
Epreli 8, 2008 ngo-10: 41 AM
UDouglas, enkosi kakhulu ngokukhankanya incwadi yeProBlogger. Bekumnandi ngenene ukusebenza noDarren noChris, kwaye ngoku incwadi isendleleni izinto ziyonwabisa ngokwenene.
Ke, uluhlobo luni lwencwadi oyibhalayo?
UJohn Wiley kunye noonyana
Epreli 8, 2008 ngo-10: 58 AM
Ndimalunga ne-40-50 iphepha lephepha eliqale ngendlela yokwenza ibhlog usebenzisa ezona ndlela zibalaseleyo zokubekwa kweinjini yokukhangela, ukufundeka, kunye nesicwangciso. Khange ndiyichukumise okwethutyana ukunyaniseka!
Epreli 8, 2008 ngo-4: 02 PM
Enkosi ngokukhankanywa kukaDouglas-uyayixabisa.
Epreli 10, 2008 ngo-8: 26 AM
Ubheja, Darren! Ndiyakuvuyela impumelelo yakho oyifumene kakuhle!